FITSINJARAM-PAHEFANA : Tetibola 18 miliara ariary natokana ho an’ ny Faritra
Vita omaly ny famelabelaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian ny politika ankapoben’ny fanjakana (Pge) teny amin’ny lapan’ny antenimieran-doholona Anosy. Hipetraka manomboka izao ny fampandrosoana miainga eny ifotony. Vola hatrany amin’ny 18 miliara ariary no hanatanterahana ny fampandrosoana isam-paritra. 21 août 2019
Omaly no namelabelatra ilay politika ankapoben’ny fanjakana tamin’ireo loholon’i Madagasikara ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta raha toa ka efa vita tamin’ny faran’ny herinandro teo ny an’ireo solombavambahoaka. Tsy nisy ny fiovana tamin’izany fa mifototra amina hevi-dehibe miisa dimy hatrany ireo sehatra imasoan’ny fitondrana hitondrana fampandrosoana sy fanatsarana. Tafiditra ao anatin’io ny lafiny ara-toe-karena, ny sosialim-bahoaka, izay ahitana ny lafiny fahasalamana sy fanabeazana, ny tontolo iainana, ny fandriam-pahalemana ary ny fitsinjaram-pahefana.
Mahakasika ity farany manokana dia nasian’ny Praiminisitra Ntsay Christian tsindrim-peo fa manomboka izao dia hataon’ny fanjakana laharam-pahamehana ny fanomezana fahefana ny Faritra. Tanjona, hoy ny fanazavany, dia mba tsy hivangongo eto Antananarivo fotsiny ihany izany fahefana izany. Omena fahaleovan-tena ny Faritra tsirairay eo amin’ny fananganana fotodrafitrasam-pampandrosoana sy fandraisana fanapahan-kevitra. Tetibola hatrany amin’ny 18 miliara ariary no natokana ho amin’izany, ka samy hahazo ny anjarany amin’io ny Faritra tsirairay.
“Raha misy ny fananganana fotodrafitrasa sy fividianana fitaovana dia anjaran’ny Kaominina, anjaran’ny Distrika ary ny Faritra no manao izany. Raha hiandry ny fanjakana foibe isika amin’ny fanapahan-kevitra dia tsy hahatontosa ny zavatra tiantsika kasaina, dia ny fampandrosoana haingana. Izay no tsy maintsy hanaovana ny fitsinjaram-pahefana”, hoy ny fanazavan’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Efa voafaritra ao anatin’ny velirano nataon’ny Filoham-pirenena ihany koa ny hametraka ireo governoran’ny Faritra. Efa taratry ny fitsinjaram-pahefana tena izy izany, ireto farany no hiandraikitra voalohany ny fampandrosoana ny Faritra mba tsy hianteheran’izy ireo amin’ny fanjakana foibe.
Ho vaindohan-draharaha ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ihany koa ny fanamboaran-dalana. Tsy ireo lalam-pirenena ihany fa hatramin’ireo lalana mamakivaky ny renivohi-paritany rehetra manerana ny nosy, miampy ny an’ireo tanàn-dehibe dia hamboarina avokoa. Notsipihan’ny Praiminisitra fa fanamboarana mihitsy no hatao fa tsy fanavaozana akory. Naharitra teo amin’ny ora iray sy sasany teo ho eo no namelabelaran’ny Praiminisitra ny Pge teo anatrehan’ireo loholon’i Madagasikara. Nafana ny adihevitra taorian’izay.